नवाैं लघुकथा दिवसमा ‘रातो डायरी’ लिएर अाए सीताराम – Everest Times News
नवाैं लघुकथा दिवसमा ‘रातो डायरी’ लिएर अाए सीताराम
काठमाडौं । नवाैं लघुकथा दिवसको पहिलो दिन सीताराम नेपालको पछिल्लो लघुकथा कृति ‘रातो डायरी’ विमोचन गरिएको छ । प्रा.डा. मोहनराज शर्माले उनको कृतिको विमोचन गरेका हुन् ।
लघुकथा समाजले आयोजना गरेको विमोचन समारोहमा नाटककार अशेष मल्ल र प्रा.डा. कपिल लामिछानेले लघुकथा कृतिमाथि समीक्षा पनि गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रा.डा. मोहनराज शर्माले समीक्षागत शुभकामना दिँदै कथाकारको पहिलो लघुकथा लेख्ने प्रयास प्रशंसनीय भएको उल्लेख गरे । कतिपय कथा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै उनले केही भने लेख्नकै लागि मात्रै लेखिएका जस्ता पनि देखिएको उल्लेख गरे ।
कथाकार सीताराम नेपालले रहर लागेर पहिलो लघुकथा कृति तयार गरेको मान्छेलाई आफ्ना कमीकमजोरी औँल्याइ दिएकोमा समीक्षकहरुप्रति आभार प्रकट गरे ।
समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ को सभापतित्वमा विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । तुलसीहरी कोइरालाले संचालन गरेको सो कार्यक्रममा समाजका पदाधिकारी पुष्करराज भट्टले आगन्तुकहरुलाई स्वागत गरेका थिए ।